Ravalomanana mivady : Maika hanokatra haino aman-jery ao amin’ny CUA -
AccueilSongandinaRavalomanana mivady : Maika hanokatra haino aman-jery ao amin’ny CUA
Ravalomanana mivady : Maika hanokatra haino aman-jery ao amin’ny CUA
Laharam-pahamehana ho an’i Lalao Ravalomanana nandritra ny fanokafana ny fivorian’ny filankevitra monisipaly androany ny fanokafana haino aman-jery eo anivon’ ny kaominina Antananarivo, na dia efa mazava aza fa ny tetibolan’ ny kaominina no tokony ho laharam-pahamehana, satria dia antoky ny fampandrosoana ny tanàna. Noho izany dia tsy ho lavorary intsony ny fitantanana ny tanàna noho ny tanjona efa mipetraka any amin’ ny zavatra hafa ho an’ireo tompon’andraikitry ny kaominina, samy hiomana amin’ ny tsy fahalavorariana izany ny mponin’ Antananarivo noho izany. Tsorina fa ny ahafahan’ i Ravalomanana mivady manantanteraka fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana no antony izao fahamaikan’ny ben’ ny tanàna izao. Tsiahivina tany ampiandohana fa efa nisy tokoa izany haino amanjerin’ny kaominina izany, saingy nofoanana satria hiaraha-mahalala ny vesatry ny fandaniana, ary eo ihany koa ny fitantanana izay tsy ara-dalàna. Tsiahivina fa ny faha-20 ny volana jolay 2015 no nisintonana ny fahazon-dalana ho an’ny ATR izay anarana noentiny tamin’izany fotoana, izany dia noho ny tsy fahazavan’ny fitantanana satria an’ny kaominina ny haino aman-jery nefa dia olon-tsotra no mitantana sy mihinana ny vola ampidiriny izay tokony hanasoavana ny tanàna.
Efa tsy zoviana amin’ny rehetra rahateo ny efa fimenomenona hateraky ny fomba fiasan’ny ben’ny tanàna amin’ ny fanomezany ireo sampandraharaha izay loharanom-bolan’ny kaominina, ary maro no efa mizaka izany ankehitriny toa ny TAXI sy ny mponina mpampiasa fiara eto an-drenivohitra amin’ ny afitsoky ny orinasa nomena ny fiandreketana izany. Ankehitriny izany dia hoe hanangana haino aman-jery indray ry Lalao Ravalomanana, ka homena an’iza indray ny fitantanana izany, ary ho alefa aiza indray ny vola miditra. Sa dia ho terena hanatanteraka dokam-barotra ao avokoa ireo mpivarotra tsirairay eny Analakely sy Behoririka ka raha tsy manao izany dia mazava ho azy fa hakaton’ny kaominina. Mbola sarotra tokoa ny hanome fahefana lalina an’i Lalao Ravalomanana, satria ny haino aman-jery izany dia fanabeazana fa tsy fiantsoana ady, na tahaka izany. Anisan’ny nahamenatra mantsy, ary nampanontany tena ny rehetra ny vava nataon’i Ravalomanana hoe « tsy misy mifampatahotra izany eto’’ izay azo raisina fa tahaka ireny jiolahim-boto ireny. Izany ve no hahazo ny haino aman-jery tsy ho loza. Hatreto ihany koa tsara ampahafantarina ny rehetra fa tompon’andraikitra feno amin’ ny fanomezana alalana hampita ny onja ny ARTEC, ity sampana ity izay efa nilaza fa efa feno, ary efa sarotra ny manome fahazon-dalana hampita zotran-tserasera amin’ izao fotoana izao.